ESI ZOO NDỊ NA-ESO VK - VKONTAKTE - 2019
Ịkwaga site n'otu nchọgharị gaa na onye ọzọ, ọ dị ezigbo mkpa ka onye ọrụ ahụ zọpụta ozi niile dị mkpa nke a na-etinye na ihe nchọgharị weebụ ochie. Karịsịa, anyị na-atụle ọnọdụ mgbe ịkwesịrị ịnyefe akwụkwọ edokọbara site na Mozilla Firefox nchọgharị weebụ na Opera nchọgharị.
Ihe ọ bụla onye ọ bụla na-eji ihe nchọgharị weebụ Mozilla Firefox na-eji ngwá ọrụ bara uru dịka Bookmarks, nke na-enye gị ohere ịchekwa njikọ na ibe weebụ maka oge dị mfe na ngwa ngwa na ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ "ịkwaga" site na Mozilla Firefox na nchọgharị Opera, ọ dịghị mkpa ọ bụla iji nwetaghachi akwụkwọ edokọbara niile - na-agbaso usoro mbufe, nke a ga-atụle n'ụzọ zuru ezu n'okpuru ebe a.
Kedu ka m si nyefee mbadamba ihe edokọbara si Mozilla Firefox na Opera?
1. Nke mbụ, ọ ga-adị anyị mkpa mbupụ ibe edokọbara site na Mozilla Firefox nchọgharị Ịntanetị na kọmputa, ichekwa ha na faịlụ dị iche. Iji mee nke a, n'aka nri nke ogwe ihe nchọgharị ahụ, pịa bọtịnụ ibe edokọbara. N'ime listi egosiri, mee nhọrọ maka ihu ọma "Gosi ihe edokọbara niile".
2. N'elu elu nke window ahụ meghere, ị ga-achọ ịhọrọ nhọrọ ahụ "Mpempe akwụkwọ Mbupu na Njikwa HTML".
3. Ihuenyo ahụ ga-egosipụta Windows Explorer, ebe ị ga-achọ ịkọwa ebe ebe faịlụ ga-echekwa, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dee aha ọhụrụ maka faịlụ ahụ.
4. Ugbu a na enwere ike ịbupua ibe edokọbara, ị ga-achọ itinye ha ozugbo na Opera. Iji mee nke a, malite na nchọgharị Opera, pịa bọtịnụ ihe nchọgharị na mpaghara aka ekpe, wee gaa "Ngwaọrụ ndị ọzọ" - "Mbupu Mbupu na Ntọala".
5. N'ọhịa "Site na" họrọ nchọgharị Mozilla Firefox, n'okpuru jide n'aka na ị nwere nnụnụ nke etinyebere na nso ihe ahụ Mmasị / ibe edokọbara, ihe ndi ozo kwesiri iji tinye uche gi. Mezue usoro mbubata amụma edina site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Bubata".
N'ihe na-esonụ, usoro ahụ ga-agwa gị banyere mmezu nke usoro ahụ.
N'ezie, na nbudata nke ibe edokọbara site Mozilla Firefox na Opera ka agwụla. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla metụtara usoro a, jụọ ha n'ime ihe ndị ahụ.